Misy fomba maro hampivelarana ny orinasa
Ningbo ZODI manangana tranokala vaovao sy fampiroboroboana google hanitatra ny faritry ny orinasa. Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia, maro ny teknolojia vaovao nipoitra. Malaza ihany koa ny fampianarana tambajotra noho ny olana ara-tsosialy. Ho fampisehoana an-tserasera, raha ny marina dia tsy manohana an'ity karazana orinasa ity aho ...Hamaky bebe kokoa »
Vokatra vaovao novolavolaina
Varingam-pamaky kodiarana Daihatsu 47550-87304, 47560-87302, 47570-87304, 47580-87302,47510-87304, 47520-87301, 47530-87304, 47540-87301 ary cylindre master 31410-87322 novolavolaina nandritra ny volana septambra 2020. Daihatsu dia faritra marika vaovao ho antsika, tena tsara. Ny maha-zava-dehibe ny vokatra vaovao ...Hamaky bebe kokoa »
Ny lanjan'i Ningbo Zodi dia ny fananganana toe-tsaina ekipa avo .Nanao fitsidihana roa andro tao amin'ny distrikan'i Maoyang, Xiangshan izahay tamin'ny 20 aogositra, nandritra ireo andro nankafizanay ny hazandranomasina sy ny fitetezana morontsiraka. Miala sasatra amin'ny asa be ataonao mba hankafizanao ny fiadanan'ny natiora. Mijanona tontolo andro izahay hatramin'ny maraina ka hatramin'ny alina ...Hamaky bebe kokoa »